AHIAHINA FIRAISANA TSIKOMBAKOMBA :: Zandary telo sarona nifandray tamina dahalo namono ny namany • AoRaha
AHIAHINA FIRAISANA TSIKOMBAKOMBA Zandary telo sarona nifandray tamina dahalo namono ny namany
Raha tsy misy ny fiovana farany dia hatolotra ny Fitsarana amin’ity herinandro ity ireo zandary telo voasambotra tany Amborom- potsy-Ambatofinandrahana, andro vitsy lasa izay. Voa- rohirohy nifandray tendro tamin’ireo dahalo namono nahafaty zandary roa tany Fenoarivo-Ambatofinan- drahana izy telo ireo. Avy hatrany, nilatsaka ny baiko hisamborana azy ireo ka atao famotorana any an-toerana.
Tsy misangy ireo lehiben’ ny Zandarimaria momba ireo zandary voarohirohy amin’ny raharaha maloto. Zandary Prainsipaly kilasy faharoa ny iray ary zandary tsotra roa ireto voasambotra, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana. “Tra-tehaka tamin’ny findain’ireo dahalo namoy ny ainy nandritra ny fifandonana tamin’ireo zandary ny hafatra fohy nalefan’ireo zandary milaza ny toerana misy azy ireo handeha hanafika ireo dahalo ireo, ka niainga tamin’io ny famotorana nisamborana ireo mpitandro filaminana ireo”, hoy ihany ny loharanom-baovao.
Tamin’ny 13 aogositra lasa teo dia nisy hetsika nataon’ny Zandarimaria namaky ny ala misy ny zohy fieren’ireo dahalo mitondra omby halatra, tany Ambatovita. Nisy ny fifandonana mahery vaika tamin’io ka namoy ny ainy ny zandary roa lahy. Lasan’ireo dahalo avokoa ny bala am-polony maro tany amin’izy ireo.
Tsy nanaiky mora io tranga io ny teo anivon’ny fibaikoana ny Zandarimaria, ka nisy ny baiko hanaovana hetsika hanafihana ireo dahalo miery ao anatin’io ala io. Nampiasaina ny angidimby. Nihetsika avokoa ireo zandary manodidina an’io toerana io nampian’ireo avy amin’ny Hery vonjy taitra ny zandarimaria na ny Fign avy aty an-drenivohitra. Vokany, dahalo am-polony no namoy ny ainy. Tamin’ny fahitana ny hafatra tao anaty findain’ izy ireo no nahitana ny hafatra avy amin’ireo zandary nosamborina ireto.
SEKOLIN’NY ZANDARIMARIA AMBOSITRA :: Manamboninahitra iray voarohirohy nanolana mpianatra